Photoshop: 8 Qalab Bilaash ah oo loogu talagalay Naqshadayaasha Webka | Abuurista khadka tooska ah
Photoshop: 8 qalab bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha websaydhka
Photoshop wuxuu sii wadaa inuu noqdo mid kamid ah kuwa ugu doorbida badan bulshada naqshadeeye websaydhka agabyo cusubna waa lagu darayaa marwalba oo kadhigaysa aalad awood kusii kordheysa. Waxaa jira kordhino badan oo mudan in la ogaado maxaa yeelay rakibiddooda waxay u tarjumaysaa waqti badan oo la keydsado iyo yareynta culeyska aan loo baahnayn. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ku eego qodobkaan xul ah qalab aad wax ku ool ah oo loogu shaqeeyo Adobe Photoshop.
Qaar badan oo ka mid ah ayaa kaa caawin doona inaad xawaareyso shaqadaada si aad waqti dheeraad ah ugu heyso dhinacyada kale ee muhiimka ah kuwa kalena waxay u shaqeyn doonaan sida buundada u dhaxeysa Photoshop iyo koodhka si naqshadahaaga iyo jeesjeesyadu u helaan natiijooyinka ugu wanaagsan iyagoo ka faa'iideysanaya ugu fiican labada adduun. Waa in la sheegaa in kuwani ay yihiin qalab gebi ahaanba bilaash markaa wax lacag ah kuma fadhido in la isku dayo oo gacanta koowaad lagu baaro. Inta badan kuwa halkan lagu xusay (marka laga reebo tan ugu dambeysa ee muuqata) waxaa loo heli karaa nooca CC 2015, in kastoo qaarkood ay la jaan qaadayaan noocyadii hore. Fiiri xiriiriyeyaasha ku lifaaqan haddii aadan haysan nooca 2015.
Adobe Photoshop iyo koodhku ma isla socdaan? Haddii aad rakibtay HTML Block, gabi ahaanba haa. Qalabkani wuxuu adeegsadaa mashiinka WebKit si uu u bixiyo HTML iyo lambarka CSS si dhakhso leh wuxuuna kuu geynayaa guddi gaar ah oo ku dhexjira Adobe Photoshop interface. Waa wax aad u macquul ah haddii aad raadineyso inaad ku dhejiso xarfaha webka mockups-kaaga si aad u hesho matalaad dhab ah oo font ah biraawsarka, sidoo kale inaad abuurto kontaroolo la isku beddeli karo.
Kordhintani waxay kaa caawin doontaa inaad u beddesho degel kasta oo qaab ah qaabka ps adoo u qaybinaya lakabyada una kala soocaya si la yaab leh oo sax ah dhammaan walxaha boggaaga. Waxaa lagugula talinayaa gaar ahaan haddii aad ka fekereyso inaad ku darto wax ka beddelka qaabka bogga jira ama haddii aad rabto inaad ku darto waxyaabo cusub si dhakhso leh iyo muuqaal ah.
Ururintaani waxay ku siin doontaa qalab aad ku siiso xalalka shaqooyinka iyo dhibaatooyinka kala duwan adoo adeegsanaya Adobe Photoshop. Ka mid ah fursadaha ay na siiso, waxaan sare u qaadi karnaa dukumintiyada ama ka dhigi karnaa kala-qaybsanaan iyo cabbiraad si hufan si loogu daro loona abaabulo waxyaabahayaga si sax ah.
Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kula shaqeysid doorsoomayaasha sida midabada iyo codadka, xargaha qoraalka, cabbirka xarfaha, dhererka xariijinta ama boosaska X iyo Y. Sida iska cad, had iyo jeer muhiim maahan in wax laga beddelo mid kasta oo walxaha ka mid ah laakiin waa ikhtiyaar badbaado leh in la shaqeeyo dib u naqshadeynta mashruuc kasta oo web ah.
Ma waxaad ka shaqeyneysaa mashruuc leh lakabyo aan tiro lahayn oo aad u baahan tahay inaad beddesho dhammaantood magac oo aadan rabin inaad gacanta ku qabato? Qalabkaan waxaad si toos ah ugu samayn kartaa hal guji. Qalabkani wuxuu leeyahay laba nooc. Nooca bilaashka ah wuxuu bixiyaa awood u leh inuu wax ka beddelo illaa shan lakab oo isku mar ah halka nooca caymiska uusan lahayn xadeyn.
Duplllicator waa xalka ugu dhaqsaha badan lakabyada iyo kooxaha. Si aad waqti ugu badbaadiso, kaliya waa inaad doorataa tirada nuqulada aad rabto inaad sameyso iyo booska jiifka iyo toosan ee nuqullada.
Ku fiican qaabeynta qaabeyn kasta. Qalabkani waa qoraal diyaar u ah inuu u beddelo looxyada afar geeslaha ah ee calaamadaha cabbirka. Waxay ku habboon tahay CC 2014 iyo 2015.
Maaha wax la raaciyo ama wax lagu daro, runtiina waa mid ka mid ah aaladaha ugu caansan ee dalabka waana lagu daray bilowgii noloshiisa. Qalabkani waa ka waxqabad badan yahay intaad moodeyso inkasta oo uu kufiican yahay awooddiisa inuu wax jaro, sidoo kale wuxuu ku habboon yahay inuu si dhakhso leh udub dhexaad u noqdo lakabkeenna iyo kooxahayaga ama xitaa tirinta tirada pixels ee ku jirtay xulashada haddii loo adeegsado guddi ee histogaraam.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Photoshop: 8 qalab bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha websaydhka
Sawirka booska Cristian Castillo dijo
runtiina ma shaqeynayo. wax walbaa horey ayey ugujireen pSD
Ku soo jawaab Cristian Castillo
Ku yar yar ee rinjiyeynta Brook Rothshank
'Doll' waa rinjiyeynta dhijitaalka ah ee Kare Huang